General - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 3)
Inona no jerena ao Trujillo
Trujillo dia tanàna Extremaduran izay manana tantara lehibe, ka izay no mahatonga azy manana lapa, fiangonana ary Ben'ny tanàna Plaza mahaliana.
Raha mieritreritra ny handositra mandritra ny roa andro ianao dia izao no mety indrindra. Sidina mankany Budapest amin'ny vidin'ny 40 euro sy trano mora vidy kokoa. Andao?.
Ny tsangambaton'i Roma dia be dia be ary tsy isalasalana fa lisitra tokony hatao mba tsy hamela na iza na iza any aoriana amin'ny dia mankany an-tanàna.
Ny famandrihana diany mialoha dia mety hanana tombony maromaro izay fantatry ny mpikasa indrindra ihany, toy ny tahiry lehibe.
Tolotra sidina izay tsy hita isan'andro. Noho izany, raha mieritreritra ny handeha any Venise ianao dia ity no fotoana lehibe anananao. Halahelo azy ve ianao?
Tolotra iray manidina izy io, ary tsy nilaza izany velively. Satria tsy dia hita foana ny dia any Ibiza amin'ny vidiny 8 euro, dia mandroso sy miverina. Mitsabo tena!
Inona no ho hita any Warsaw
Warsaw no renivohitr'i Polonina ary manana tantara marobe ao ambadik'izany, nefa manana zavatra betsaka azo atolotra ireo mpizahatany ihany koa.
Avelanay anao amin'ny tolotra manokana izay Bangkok no halehany. Manidina trano fandraisam-bahiny bebe kokoa noho ny vola kely noho izay kasainao. Aza adino izany !.
Araraoty ity tolotra ity izay handanianao 3 andro any Tenerife amin'ny vidiny 174 euro, izay efa tafiditra ao ny sidina sy ny hotely.
Ny sidina tsy misy aleha dia mety hivezivezena amin'ny toerana maro miaraka amin'ny teti-bola voafetra, mahita teti-bola tsara.
Fomba amam-panao aostralianina
Ny fomba amam-panao any Aostralia dia misy ifandraisany betsaka amin'i Angletera, satria firenena nanjanaka misy mpifindra monina maro sy fifangaroan'ny kolontsaina izy io.
Ny fomba amam-panao any Irlandy dia manankarena sy maro karazana, mifangaro indrindra amin'ny kolotsaina Celtic taloha izay mbola miaina.
Kitapo tanana amin'ny fiaramanidina, inona no tokony ho fantatrao
Ny kitapo tanana dia misy fitsipika sy fepetra tsy maintsy arahina, noho izany dia ilaina ny mazava tsara momba ny takiana aminy.
Ny valan-javaboahary Nacedero del Urederra any Navarra dia manome antsika habaka voajanahary misy hatsarana tsara hankafizinay miaraka amin'ny fianakaviana.
Misy safidy lehibe amin'ny akanjo italiana mahazatra, miaraka amin'ny sangan'asa tamin'ny Renaissance, aingam-panahy romana ary akanjo Venetiana.
Efatra andro any New York noho ny vola kely noho ny noeritreretinao
Izahay dia manome anao tolotra dia ho any New York, amin'ny vidiny ambany kokoa noho izay eritreretinao. Fitsangatsanganana efatra andro izay hahatonga anao ho tia.
Fitsidihana ireo lava-bato any Artá ​​any Mallorca
Ny Caves of Artá ​​taloha dia miorina ao Mallorca ary manolotra fitsidihana mahaliana any amin'ny nosy, miaraka amina formations taloha.
Inona no ho hitanao ao amin'ny Vila Real de Santo Antonio
Ny tanàna Portiogey Vila Real de Santo Antonio dia toerana mangina misy torapasika mahafinaritra any amin'ny faritra Algarve.
Ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Sierra de Huelva
Ao amin'ny Sierra de Huelva dia misy tanàna kely tsara tarehy, izay misy toerana mahaliana maro.
Mitsangatsangana any Paris tantaram-pitiavana 17 euro
Raha te-handehandeha any Paris ianao amin'ny vidiny mora dia aza adino ny tolotra atolotray anao anio. Na ny sidina na ny hôtely dia handresy lahatra anao.
Mandosira any London mandritra ny iray andro amin'ny vidin'ny 25 euro
Ankehitriny ianao dia afaka mandositra any Londres mandritra ny iray andro amin'ny 25 euro fotsiny. Fotoana tsy manam-paharoa izay tsy azonao adino!
Manidina any Amsterdam amin'ny vidiny 65 fotsiny
Ankehitriny ianao dia afaka manidina any Amsterdam tsy dia araka ny noeritreretinao. Hanana herinandro ianao hahitana ny zorony rehetra. Andao?.
Manidina any Mallorca amin'ny vidiny 12 euro fotsiny
Mallorca no iray amin'ny toerana itodiana indrindra handany ny fialantsasatrao. Raha te handoa kely kokoa ianao dia aza adino ity tolotra tsara ity mandritra ny 8 andro.
Fitsangantsanganana mamaky an'i Río Mundo any Albacete
Eo anelanelan'ny Sierra del Segura sy ny Sierra de Alcaraz, any Albacete, no misy ny Los Calares Natural Park ...
Tranombakoka Chocolate, mahazatra any amin'ny firenena maro
Ankafizo ny Museum Chocolate, andrim-panjakana misy amin'ny firenena maro ary misy manintona na fampiratiana samihafa hizarana amin'ny fianakaviana.
Tolotra mandritra ny 5 andro mankafy an'i Prague
Ny fivezivezena mandritra ny dimy andro amin'ny volana Jolay dia mety ho fivoahana lehibe. Fa tsy izao intsony, nahita ny vidiny mirary izahay hankafizanay Prague, tanàna tsy mampino.
Zaridaina voajanahary Sierra Magina ao Jaén
Ny valan-javaboary Sierra Mágina dia manome antsika zaridaina voajanahary tsara tarehy, làlana fitsangantsanganana ary tanàna kely misy trano mimanda.
Tsidiho ny Caldera de Taburiente
Handeha any amin'ny Nosy Canary ve ianao amin'ny fahavaratra ity? Avy eo mitsangatsangana manodidina ny nosy La Palma ary fantaro ny mahafinaritra Caldera de Taburiente. Goavana sy tsara tarehy izy io!
Roma amin'ny fahavaratra, araraoty ny sidina 60 euro
Amin'ny fahavaratra dia afaka manao dia lavitra ihany koa isika noho ny eritreretintsika. Amin'ity tranga ity dia handeha ho any Roma isika mandritra ny roa andro ary 60 euro. Ankafizo ny tolotra toy izao satria tsy haharitra ela raha mieritreritra indroa. Omano ny kitaponao!
Mandehandeha maimaim-poana amin'ny maha-mpilatsaka an-tsitrapo anao
Ny fitsangatsanganana maimaimpoana amin'ny maha-mpilatsaka an-tsitrapo raha hitantsika izao tontolo izao dia azo atao, satria misy programa mpilatsaka an-tsitrapo any amin'ny firenena maro ary misy iraka samihafa.
Ny sidina sy ny toeram-ponenana roa alina ao Marrakech amin'ny vidin'ny 60 euro
Raha mikasa ny hanao fialantsasatra ianao dia tonga ny fotoana mety indrindra. Ny sidina sy ny toeram-ponenana mandritra ny roa alina ao Marrakech dia handoa vola 60 Euro anao. Tsy izany ve no fomba tsara hanesorana ny fanazaran-tena ataonao mandritra ny roa andro?
Tsidiho ny morontsiraka tsara indrindra any Thailand
Jereo hoe iza ny morontsiraka tsara indrindra any Thailand izay tsy tokony halainao amin'ny dianao mankany amin'ity firenena tsara tarehy ity, manomboka amin'ny be olona indrindra ka hatramin'ny tsy voaroaka.
Inona ny taratasy fanamarinana momba ny vaksiny iraisam-pirenena?
Na inona na inona antony mahatonga ny dianao dia tsy maintsy misy fepetra raisina hatrany hikarakarana ny fahasalamantsika. Indrindra rehefa…
Sarotra ny mitsidika an'i Roma ao anatin'ny telo andro, fa holazainay aminao kosa izay azonao ambara fa ilaina mba hahafahanao manarona ny zava-drehetra.
Wadi Rum, fitsidihana ny tany efitra Jordaniana
Ny efitra Wadi Rum dia miorina ao Jordania ary iray amin'ireo mpizaha tany manintona azy aorian'ny Petra, tany efitra anaovana hetsika marobe.
Hantsana Los Gigantes any Tenerife
Ny hantsam-bato Los Gigantes ao Tenerife dia nanjary iray amin'ireo faritra mpizahatany indrindra, satria manolotra traikefa feno sy mahaliana izy ireo.
Ireto ny sasany amin'ireo morontsiraka 10 tsara indrindra any Tenerife, faritra feno fasika mahavariana izay mampiseho ny hakanton'ny natiora amin'ny nosy.
Ny terraces tsara indrindra any Barcelona
Ny iray amin'ireo fahafinaretana ateraky ny lohataona dia ny mipetrapetraka eo amin'ny terraces mba hisotro zava-pisotro tsara ...
Ny tanànan'i Leuven dia kilometatra vitsivitsy monja miala an'i Bruxelles ary fitsidihana tonga lafatra hahafantarana an'ity tanànan'ny oniversite ity izay misy zavatra betsaka azo atolotra.
Raha tianao ny tantaran'i Count Dracula, azonao atao ny mitsidika ny Bran Castle any Romania ... ary mandany alina Halloween tsy hay hadinoina mihitsy aza!
Inona no jerena ao Nerja, tanàna fizahan-tany any atsimo
Jereo izay rehetra hitanao ao amin'ny tanànan'ny Malaga mahafinaritra an'i Nerja, fantatra amin'ny Balcón de Europa sy ireo lava-bato fahiny.
Inona no ho hita ao Verona
Ny tanànan'ny Verona any Itona dia tsy ny toerana tokony honenan'i Romeo sy Juliet fotsiny, fa manolotra tsangambato sy fiangonana maro hitsidika azy.
Nosy Lofoten, paradisa any Norvezy
Manomana zavatra manokana ho an'ny Paska ve ianao? Ahoana ny fandehananao any Norvezy? Any, ambonin'ilay faribolana Arctic, no misy ny Nosy Lofoten tsara tarehy.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Asturias
Jereo ny morontsiraka tsara indrindra ao Asturias, torapasika miorina eo amoron'ny morontsiraka Asturian tsara tarehy, voahodidin'ny habaka voajanahary, tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao.
Jereo izay ho hitanao sy hatao ao amin'ny tanànan'i Sintra Portiogey, tsy lavitra an'i Lisbonne, tanàna feno lapa sy toerana voajanahary tsara tarehy.
Jereo izay rehetra hitanao ao an-tanànan'i Seville, manomboka amin'ny Giralda malaza ka hatramin'ny katedraly azy na ny Museum of Flamenco Dance mahaliana.
Any Peroa, eo anelanelan'ny tanànan'ny Nazca sy Palpa, iray amin'ireo zava-miafina arkeolojika malaza indrindra rehetra ...
Ny karatra Gold American Express, iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny dia
Ny karatra Gold American Express, iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana, ary eto izahay dia milaza aminao ny andian-tombony azonao amin'izany.
Nanomboka tamin'ny vato voalohany napetraka tamin'ny Oktobra 1961 tamin'ny andron'ny Virgen del Pilar mandraka androany, ny ...
Fampiharana 5 izay hanampy anao handamina ny dianao
Ireto misy fampiharana 5 izay hanampy anao handamina ny dianao: fitateram-bahoaka, toetrandro, fampiantranoana, mpandika teny ary tolo-kevitra fitsidihana.
Jereo ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra eropeana fialantsasatra hitadiavana morontsiraka mahafinaritra miaraka amin'ny rano mangarahara.
Raha misy fanatanjahantena miakatra amin'ny sokajin-javatra manerantany miaraka amin'ireo mpankafy an-tapitrisany eran'izao tontolo izao dia ...
Vao tsy ela akory izay ny CNN dia namoaka ny lisitr'ireo toerana 12 tokony halavirin'ny mpizahatany mandritra ny fialantsasatra ao ...
Tsidiho ny kompana dune Corrubedo any Galicia
Ny complexe dune Corrubedo dia miorina ao Galicia, ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka Ribeira ary manolotra habaka voajanahary misy hatsarana lehibe.
Mbola tsy nanonofy ny handeha ho any Azores ve ianao?
Androany izahay dia manome anao tolotra fitsangatsanganana mahafinaritra any amin'ny Nosy Azores. Raha naniry ny handeha ho any amin'izy ireo ianao dia izao no fotoana mety.
Tamin'ny 15 Janoary, nampihatra ny politika vaovao momba ny entana voafetra i Ryanair, izay tsy mamela ny fampidinana ...
Ny Kianjan'i St. Marka, azo antoka, no tandindon'ny tantara any Venise. Olona 40 tapitrisa eo ho eo isan-taona ...
Ny fandehanana mitsangatsangana fiara dia mety ho traikefa nahafinaritra sy mahaliana tanteraka, saingy mila manisa zavatra vitsivitsy kasainao hatao ianao.
Ny hotely ranomandry dia sosokevitra tena mahaliana ary afaka mahita bebe kokoa isika, saika noforonina ho an'ny vanim-potoanan'ny ririnina.
Antony lehibe tsy andehanana matetika matetika
Ao amin'ny lahatsoratray anio, dia manolotra ny sasany amin'ireo antony lehibe tsy handehanana matetika kokoa noho ny nomen'ny Espaniola. Anisan'izy ireo ve ianao?
Fanomezana 10 ilaina ho an'ny mpandeha be mpampiasa
Ho anao miaraka amin'ny ankohonanao na ny namanao izay mpivezivezy dia lisitra fanomezana ity mba hahafinaritra kokoa ny dia ataonao.
Tsidiho i Oslo, izay ho hita sy hatao any an-drenivohitr'i Norvezy II
Mampiseho drafitra maro hafa izahay hanampiana ny fitsidihanao ny tanànan'i Oslo, toerana feno tranombakoka ary fialamboly tsy manam-paharoa.
Atombohy amin'ity fanolorana kely ity ny taona any Paris
Androany, Alin'ny Krismasy, manome anao tolotra fialantsasatra ianao hamarana ny taona 2017 ary hanomboka amin'ny fomba hafa amin'ny 2018: manomboka ny taona any Paris amin'ity tolotra kely ity.
Tsidiho i Oslo, izay ho hita sy hatao any an-drenivohitr'i Norvezy I
Fantaro izay hitanao sy azonao atao ao Oslo renivohitra norveziana. Tanàna feno tranombakoka sy fitsidihana mahafinaritra hatao.
Fialantsasatra hankafizanao ny Noely amin'ny toerana hafa
Miresaka fialantsasatra vitsivitsy azo atao mandritra ny Krismasy isika, amin'ireo toerana izay miaina ireo daty ireo amin'ny fomba miavaka.
Fantaro ny toeram-pambolena kafe tany Cuba, ny tantara ary ny tsiro
Ho any Kiobà ve ianao? Aza mijanona eo amoron-dranomasina fa manao fizahantany eco! Any Kiobà dia misy toeram-pambolena kafe antitra hitsidihana mandritra ny fotoana mamakivaky sary miavaka.
Fitsidihana tena ilaina 16 any Sardinia II
Asehonay anao ny fitsidihana tena ilaina valo hatao any amin'ny nosy Sardinia tsara tarehy, manomboka amin'ny tanàna kely ka hatramin'ny fametrahana.
Mahita fitsidihana tena ilaina vitsivitsy ao amin'ny nosy Sardinia, toerana feno torapasika, tanàna tsara tarehy ary tanàna manan-tantara.
Toerana tsy manam-paharoa 5 hitsidihana an-tongotra
Ny tany dia feno toerana feno fahasoavana tokana ary maro amin'izy ireo dia any amin'ny faritra lavitra ...
Ireto ny sasany amin'ireo tanàna sy tanàna manan-danja indrindra amin'ny faritra atsimon'i Portiogaly, fantatra amin'ny anarana hoe Algarve, toerana tena mpizahatany.
Miomàna mandritra ny herintaona ny kasainao handeha any amin'ny lanezy miaraka amin'ny ankizy. Fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny fianakaviana iray manontolo any amin'ny toeram-pialantsasatra.
Inona ireo lesoka matetika ataontsika rehefa mandeha?
Amin'ity lahatsoratra anio alahady ity dia lazainay aminao izay lesoka matetika ataontsika rehefa mandeha amin'ny toerana vaovao izahay. Aza mahita azy ireo intsony!
Tanàna mahafinaritra 5 ao amin'ny Rías Baixas any Galicia
Mitadiava tanàna mahafinaritra dimy ao amin'ny Rías Baixas any Galicia, faritra feno tanàna amoron-tsiraka manana toetra tsara.
Ny Playlists tsara indrindra rehefa mandeha
Amin'ity lahatsoratra ity dia atolotray anao ny playlist mozika tsara indrindra eny an-dalana. Aza adino ny mozika tsara amin'ny dia ... Handeha hilalao ve isika?
20 amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao II
Mitadiava tsangambato folo hafa tsy ho diso amin'ny diantsika eran'izao tontolo izao, anisan'izany ireo tanàna taloha.
Anio dia asehonay anao ireo tsangambato folo manerantany izay heverinay fa tokony hotsidihinareo, lisitry ny toerana mahavariana.
Toerana 7 tsy dia fantatra loatra any Portugal
Mitadiava toerana 7 tsy dia fantatra loatra any Portiogaly, toerana misy fahalianana lehibe izay tsy ny be mpitia indrindra fa ny firavaka tena tsara.
Te hahafantatra an'i Lisbonne ianao amin'ny faran'ny herinandro fialantsasatra amin'ny Desambra?
Te hahafantatra an'i Lisbonne ianao amin'ny faran'ny herinandro fialantsasatra amin'ny Desambra? Androany dia entinay aminao izao drafitra lehibe hahafantarana ny renivohitra Portiogey izao.
Toerana 4 tokony hitsidihanao any Portugal
Lazainay aminao hoe iza avy ireo toerana efatra ilaina hitsidika an'i Portugal. Tanàna tsara tarehy efatra misy tsangambato sy faritra voajanahary.
Zavatra tokony hatao any Mallorca amin'ny ririnina
Nosy mallorca i Mallorca, fa mandritra ny vanim-potoana ambany dia mety ho toerana tsara hahitana ireo tsangambato lehibe ao aminy.
O Camiño dos Faros de Galicia amin'ny dingana valo II
Efa hitantsika ny dingana telo voalohany an'ny O Camiño dos Faros, làlana tokana manamorona ny morontsirak'i Galisiana izay ...
'O Camiño dos Faros' any Galicia amin'ny dingana valo I
O Camiño dos Faros dia làlana fitsangantsanganana mahafinaritra any Galicia izay mandehandeha amin'ny morontsiraka avaratra eo anelanelan'ny sary mahafinaritra.
Morontsiraka maro loko, ho an'ny tsiro rehetra
Ny morontsiraka dia tsy volamena sy fotsy fotsiny. Misy maitso, mena, mainty, mavokely. Resaka tolo-kevitra fotsiny ny hahafantatra sy hankafizany azy rehetra. Sahy ve ianao?
Toerana tsy manam-paharoa 5 hitsidihana an'i Galicia
Mampiseho aminao zoro dimy tsy manam-paharoa ao Galicia izahay izay tokony hotsidihan'ny tsirairay indraindray, manomboka amin'ny tanàna ka hatramin'ny toerana voajanahary.
Raha te-hitsidika firenena mahafinaritra ianao, eto dia manolotra tolotra mahafinaritra ho anao izahay mandritra ny andro vitsivitsy: Fantaro i Irlanda afaka 8 andro amin'ny 344 euro.
Mitadiava zavatra mahaliana ho hita sy hatao any Ekosy, tany feno zava-miafina, tantara ary làlana feno tranobe.
Fantaro maimaimpoana i Dublin, fomba iray hankafizana ny renivohitra Irlandy nefa tsy mila mandany vola, ho an'ireo izay mandeha amin'ny tetibola mihena.
Fifanarahana inona: mifankahalala amin'i Bali mandritra ny 10 andro amin'ny 1.141 euro! Ity tolotra mahafinaritra ity dia avy amin'ny tanan'i Destinia. Hitsidika ny nosy ve ianao?
Handeha any Italia ve ianao amin'ity volana ity? Volana mahafinaritra i Oktobra miaraka amin'ny andro mafana. Aza hadino ny mitsidika an'i Florence fa misy fety mahafinaritra maro amin'ny volana Oktobra.
Torohevitra hanomanana valizy ho amin'ny dia
Mitadiava torohevitra mahaliana vitsivitsy hanomanana ny valizy amin'ny dia ataonay, miaraka amin'izay rehetra ilainao sy ilaina.
Antony hitsidihana an'i Galicia mandritra ny fararano
Jereo ny antony tsara indrindra hitsidihana an'i Galicia mandritra ny vanim-potoanan'ny fararano, miaraka amin'ny zavatra maro hita sy azo atao.
Te handehandeha any amin'ny iray amin'ireo toerana mangatsiaka ve ianao?
Ny fanontaniana apetraka aminao aminao anio dia tena tsotra: te-handeha ho any amin'ny iray amin'ireo toerana mangatsiaka ireo ve ianao? Iza amin'ireo no efa nandehananao?
Ahoana ny fomba drafitra fitsangatsanganana ho an'ny zokiolona
Fantaro ny fomba handrafetana ny dia ho an'ireo zokiolona, ​​amin'ny fieritreretana ireo andinindininy kely mba hahafahan'izy ireo mankafy ny fialantsasatra.
Toerana mahaliana any Gran Canaria
Jereo ireto toerana mahaliana ireto ao amin'ny nosy Gran Canaria, nosy misy toerana voajanahary, foibe manan-tantara ary toerana.
Ankafizo ny Cheste MotoGP Grand Prix amin'ny 189 euro
Androany dia tolotra hafa no entinay ho anao, mety ho an'ireo mpankafy moto: Cheste Moto GP Grand Prix avy amin'ny 189 euro.
Androany dia manome tolotra dia mahaliana be ianao ho an'ny Puente del Pilar: Ny sidina sy ny hotely any London dia 320 euro fotsiny. Misoratra anarana?
Mahita zavatra mahaliana 9 ho hita sy hatao ao Toulouse, tanàna frantsay tsara tarehy feno tranombakoka, zavakanto ary tranobe tsara tarehy.
Ryanair dia nanitatra ny sidina nofoanana hatramin'ny martsa 2018
Ryanair dia manao azy indray: manitatra ny sidina nofoanana hatramin'ny volana martsa 2018. Eto izahay dia milaza aminao hoe làlana 34 iza no ho voakasik'ireo fanafoanana ireo.
Fitsidihana tena ilaina 6 ao an-tanànan'i Florence
Mitadiava fitsidihana tena ilaina enina ao an-tanànan'ny tanànan'i Florence, iray amin'ireo toerana notsidihina indrindra noho ny kanto sy ny tsangambato rehetra ananany.
Ankafizo zavatra maimaim-poana isan-karazany ao amin'ny tanànan'i Lisbon. Amboary ny teti-bolanao amin'ny fanampiana ireo hetsika tsy andoavam-bola ireo amin'ny fandaharam-potoana.
Ireto ny sasany amin'ireo sidina nofoanan'ny orinasa Ryanair
Ireto ny sasany amin'ireo sidina nofoanan'ny orinasa Ryanair. Ny lisitray dia mandeha hatramin'ny 1 Oktobra fa mametraka rohy amin'ny rehetra izahay.
Nosy eropeana mahafinaritra handeha hitsangatsangana
Manome anao hevitra vitsivitsy izahay handrafetana ny dia mankany amin'ireo nosy eropeana malaza indrindra amin'izao fotoana izao, hatrany Ibiza ka hatrany Kreta.
Avy any Seville mankany Roma, dia mandroso sy miverina, amin'ny vidiny 169 euro fotsiny. Fifanarahana inona re!
Somary "be ranony" ny tolotra anio: Avy any Seville ka hatrany Roma, dia mandroso sy miverina, amin'ny vidiny 169 euro fotsiny. Mandehandeha miaraka amin'i Ryanair avy any Skyscanner.
Ahoana ny fomba hisafidianana tsara ny karazan-trano hipetrahana rehefa mandeha ianao
Mitadiava hevitra sasantsasany momba ny fomba hisafidianana karazana karazana trano hipetrahana ho an'ny dia miaraka amin'ireo safidy rehetra azo atao anio.
Ny zavatra ho hita sy atao ao an-tanànan'i Bruxelles II
Mitadiava zavatra bebe kokoa ho hitanao sy hatao ao an-tanànan'i Bruxelles. Toerana hafa hanampy amin'ny lisitra miaraka amin'ny valan-javaboary lehibe, lapa ary tranombakoka.
Ny Alhambra any Granada dia manokatra ny Torre de la Pólvora amin'ny besinimaro amin'ny volana septambra
Toy ny efa fanaony hatramin'ny lohataona lasa teo, ny Birao Alhambra sy Generalife ao Granada dia misokatra ho an'ny besinimaro ...
Inona no ho hita sy atao ao an-tanànan'i Bruxelles I
Jereo izay ho hitanao sy hatao ao an-tanànan'i Bruxelles, tanàna manan-tantara sy maoderina feno toerana mahaliana sy fitsidihana tena ilaina.
Torohevitra hankafizanao fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro
Mitadiava torohevitra vitsivitsy hankafizanao ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny hevitra tsara handehanana mitsangatsangana.
Toerana fitsangatsanganana tsara indrindra any Eropa raha ny lazain'i TripAdvisor
Ho hitantsika ny sasany amin'ireo toera-pizahan-tany mahaliana any Eropa, miaraka amin'ireo tsangambato sy toerana tena ilaina ho an'ny mpandeha.
Jereo ireo toerana fizahan-tany folo tsara indrindra any Espana araka ny vavahady TripAdvisor. Toerana izay tsy maintsy soratantsika ho an'ny fialan-tsasatra manaraka.
Ny mpahay siansa manerantany dia naminavina fa amin'ny taona 2100 dia mety hiakatra ny haavon'ny ranomasina ary hametraka ...
Torohevitra hialana amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo amin'ny fialan-tsasatra
Amin'izao vanim-potoana izao, fahita matetika ny dia any ivelany, indrindra any amin'ny toerana lavitra sy any ivelany. Andramo ny ...
Toerana mahafinaritra hitsidihana an'i Frantsa
Mitadiava toerana mahafinaritra sy manintona any Frantsa, manomboka amin'ny làlana avy amin'ny trano mimanda ka hatrany amin'ny tanàna antonontany sy tanàna kely angano.
Bargain: sidina Roundtrip mankany Paris amin'ny 32 euro
Amin'ity tolotra androany ity dia tena manome varotra anao izahay: sidina Roundtrip mankany Paris amin'ny 32 euro avy amin'ny seranam-piaramanidina Espaniola isan-karazany.
Tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra any Andalusia
Atorinay anao ny sasany amin'ireo tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra indrindra ao Andalusia. Safidy tanàna kely hitsidika azy.
Jereo izay rehetra hitanao sy ataonao ao amin'ny tanànan'ny Belfast, miaraka amin'ny lasa indostrialy sy feno korontana, ankehitriny dia tanàna maoderina izy io.
Toerana hitsidika ity fararano ity
Mitadiava hevitra vitsivitsy amin'ny fisafidianana toerana fitsangatsanganana amin'ity fararano ity, manomboka amin'ny valan-javaboary voajanahary, hatrany amin'ny morontsiraka na amin'ireo tanàna eropeana.
Vao haingana izahay no niresaka momba ny fomba nandraisan'ny governemanta teo an-toerana Venice andiany fepetra hiarovana ny Plaza ...
Hatramin'ny lohataona lasa teo, ireo izay tia ny Alhambra any Granada dia tsy nitsahatra nanana vaovao tsara mifandraika ...
Torohevitra hiomanana amin'ny fanaovana Camino de Santiago
Manome anao toro-hevitra vitsivitsy mahasoa izahay hiomanana hanao ny Camino de Santiago amin'ny dingana sasany lehibe.
Jereo ny antony tsara indrindra hisafidianana toerana ambanivohitra amin'ny fialan-tsasatrao manaraka, toerana milamina eo amin'ny natiora.
Madrid dia tanàna manome antsika zavatra tsy misy farany ho hita sy hatao ary raha mandeha mpivady isika ...
Rehefa manomboka mitsangatsangana any ivelany isika, ny pasipaoro no taratasinay fampidirana. Ny fampahalalana raketiny ...
Fitsangatsanganana an-tsambo, toro-hevitra azo ampiharina
Ny fitsangatsanganana an-tsambo dia zava-niainana vaovao, noho izany dia tsy maintsy mahafantatra zavatra vitsivitsy mialoha isika. Manome anao torohevitra azo ampiharina izahay.
Torohevitra azo ampiharina amin'ny fitsangatsanganana any Roma
Toerana iray mahasarika mpizahatany an'arivony isan-taona ny tanànan'i Roma, ary tsy mahagaga raha ...
Tsidiho ireo toerana samihafa any Espana izay naka sary ny Game of Thrones: Guadalajara, Girona, Seville, Cáceres, Peñíscola, sns.
Nandritra ny volana Jolay, Barcelona dia nanaiky ny hetra fizahan-tany vaovao ho an'ny fitsangatsanganana, izay hanampy ireo izay ...
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia mitondra vaovao farany ho an'ny mpandeha izahay: tanàna meksikanina ao amin'ny 'top 1' amin'ny filaharan'ny magazine Travel + Leasure.
Raha te handeha sambo fitsangatsanganana foana ianao ary hamakivaky ireo tanàna espaniola sy italiana dia ity no anjaranao. Avy amin'ny 649 euro dia mety ho anao izany!
Tanàna mahafinaritra 20 ao Galicia II
Mitadiava tanàna folo hafa mahafinaritra eto Galicia amin'ity safidy faharoa ity amin'ny toerana kely hitsidihana an'ity tany mahafinaritra ity.
Fomba fanao an-toerana hafahafa 7 ho an'ny mpizahatany
Ny fitsangatsanganana dia fanandramana tena mampanan-karena. Manokatra ny saina izy io ary mamela hahafantatra fomba fiainana hafa. Ny firenena rehetra ...
Jereo ny folo voalohany amin'ireo tanàna tsara tarehy 20 any Galicia. Toerana izay be atolotra amina zorony kely.
Mitadiava antony vitsivitsy ary ambonin'ireo torohevitra vitsivitsy mba hankafizanao ny dia lavitra, fanandramana vaovao.
Toerana 8 eto amin'izao tontolo izao voarara amin'ny vehivavy
Nandritra ny tantara manontolo, indrisy fa navakavahana ny vehivavy noho ny lahy sy ny vavy ary na eo aza ...
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia manome anao tolotra fitsangatsanganana izahay mba hiditra ao afovoan'i Eropa: Fantaro i Prague sy Budapest: 378 euro, trano sy sidina
Ankafizo ny drafitra samihafa hankafizanao ny fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy. Ireo dia drafitra mety indrindra raha handeha hanao dia lavitra izahay mianakavy.
Mitadiava tranonkala voajanahary tsy mampino fito any Eropa ho very amin'ny fialan-tsasatrao manaraka, manomboka any an'efitra ka hatrany amin'ny farihy sy morontsiraka.
Ny iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ireo mpizahatany rehetra rehefa mivoaka any ivelany dia ny hitsangatsangana any ...
Zavatra tsy maintsy ataonao any Galicia amin'ny fahavaratra
Jereo ny zavatra mahaliana sy mahafinaritra azonao atao any Galicia amin'ny fahavaratra, toerana izay malaza ankehitriny.
Mandehana any Punta Cana amin'ny vidiny 690 euro fotsiny, tafiditra ao daholo
Mitsangatsangana any Punta Cana amin'ny vidiny 690 euro fotsiny, tafiditra ao anatin'ity tolotra nofidianay anao ity avy amin'ny tranokala Rumbo.
Ahoana no hikarakarana ny fahasalaman'ny ankohonana mandritra ny dia
Mitadiava hevitra vitsivitsy hikarakarana ny fahasalaman'ny fianakaviana mandritra ny dia. Zava-dehibe ny fiheverana na dia ny pitsopitsony kely indrindra aza.
Androany dia manolotra toro-hevitra maromaro izahay mba hahazoana sidina mora vidy kokoa. 5 amin'ny fitambarany izay tsy hamonjy vola fotsiny fa ho fotoana koa.
Torohevitra momba ny dia miaraka amin'ny alikanao manerana an'izao tontolo izao
Manome anao torohevitra vitsivitsy izahay momba ny dia miaraka amin'ny alikanao manerana an'izao tontolo izao, hevitra izay mety hanamora ny fandehananao manao vakansy miaraka amin'ny biby fiompinao.
WorldPride Madrid 2017, torolàlana azo antoka momba ny antoko Pride
Manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny 2 Jolay, Madrid dia be ny zavatra tokony hankalazaina. Eo ambanin'ny teny filamatra «Tiavo izay tianao, Madrid ...
Manidina sy mijanona ao Tenerife amin'ny 118 euro miaraka amin'i Destinia
Amin'ity tolotra androany ity dia manoro hevitra anao izahay handeha any Tenerife: Manidina ary mijanona ao Tenerife amin'ny 118 euro miaraka amin'i Destinia. Araraoty tsara ny vakansy!
Tsidiho ny tanàna akaikin'i Porto
Mampiseho hevitra vitsivitsy mahaliana anao izahay handehanana amin'ny tanàna akaikin'i Porto, toerana mahaliana be izay azo tsidihina ao anatin'ny iray andro.
Inona no ho hita sy atao ao an-tanànan'i Malaga
Ny tanànan'i Malaga dia fiombonamben'ny tsangambato, tranombakoka ary fialamboly amin'ny morontsiraka sy ny arabe fiantsenana izay ahafahanao mandany ny andro.
Liana amin'ny Bratislava ve ianao? Toa zava-miafina sy Moyen Âge ve izany? Noho izany, tsidiho izy io satria tsy ho diso fanantenana ianao: trano mimanda, fiangonana, farihy ary foara antonontonony.
Jereo ny zavatra hitanao sy ataonao ao amin'ny tanànan'ny Hamburg, tanàna iray mahaliana miaraka amin'ny fitsidihana tena ilaina.
Torohevitra momba ny dia lavitra ataon'ny lamasinina
Mitadiava torohevitra sy tombony sasany amin'ny dia amin'ny lamasinina, fitaterana izay tsy dia malaza loatra, nefa mety ho safidy tsara izany.
Hitsidika an'i New York ve ianao ary te hahafantatra hoe iza amin'ireo fivarotana tsara indrindra amin'ny Fifth Avenue malaza? Aza adino ny tari-dalanay miantsena any NY
Ao amin'ny Riviera Maya dia misy zavatra maro hita sy azo atao, manomboka amin'ny fisitrika amoron-dranomasina ka hatrany amin'ny fitsidihana ny sisa tavela amin'i Maya, fiakarana piramida na filomanosana any cenotes.
Amoron-dranomasina 10 any Espana no very amin'izao fahavaratra izao
Mitadiava tora-pasika mahafinaritra folo any Espana izay tsy tadiavinay amin'ity fahavaratra ity. Arenales izay avy any avaratra ka hatrany atsimo mandalo amin'ireo nosy.
Ny katedraly-Moskea ao Córdoba toerana mahaliana indrindra an'ny mpizahatany any Eropa 2017
I Espana dia iray amin'ireo firenena mahasarika mpizahatany betsaka indrindra isan-taona noho ny fitambaran'ny kolikoly, kolontsaina, ...
Toerana jerena amin'ny fitsidihana an'i Edinburgh
Jereo ny zoro rehetra arosonay hitsidika an'i Edinburgh, tanàna feno hatsaran-tarehy sy tsangambato.
Torohevitra hanararaotana ny sidina lavitra
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay mba hahombiazana amin'ny sidina lavitra. Ny fomba tsara indrindra hitondrana ireo ora rehetra ireo amin'ny fiaramanidina.
Nahita an'i Nikaragoà, ny perla amerikanina afovoany
Vitsy ny toerana itodiana ka tsy dia araraotin'ny fizahan-tany ary tsara tarehy sy tia mandray olona toa an'i Nikaragoà. Eo indrindra no mipetraka ...
Zoro manokana ao amin'ny Galisiana Rías Baixas
Ho hitantsika ny sasany amin'ireo zorony manokana an'ny Galisiana Rías Baixas, miaraka amin'ireo riandrano, nosy ary trano mimanda hitsidihana.
Mitadiava torohevitra vitsivitsy mba hankafizanao ny fialan-tsasatrao manaraka eo amorontsiraka. Hevitra hamboarina ny zava-drehetra fa tsy ho gaga.
Ny tolotra isan-kerinandro androany dia atolotray eDreams: Fandehanana mandroso avy any Madrid ka hatrany Havana amin'ny 700 euro fotsiny. Varotra izaitsizy!
Ahoana raha mandeha mitoetra sy miaina isika?
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia asainay mieritreritra sy misaintsaina ianao ... Inona no hevi-toerana nofidinao fa tsy ny fivezivezena ihany, fa ny hijanonana ihany koa?
Tsidiho ny tanànan'ny Bologna any Italia, izay ho hitanao
Jereo izay ho hitanao ao Bologna amin'ny fitsidihana ny tanàna izay feno tilikambo taloha ary mbola fantatra amin'ny arcades-ny.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Seychelles
Handeha any amin'ny nosin'i Seychelles izahay hahalala ny morontsiraka sasany tsara indrindra, ny zavatra ilaina izay tsy maintsy tsidihintsika sy fantatsika
Hatramin'ny andro taloha, ny fivahiniana masina tany amin'ny toerana masina dia fanaon'ny fivavahana maro. Ireo zotram-piaramanidina ireo dia nisy dikany ...
Amin'ity tolotra ity dia manorata hotely any Córdoba ary zahao ny tsenambarotra misy azy, ankoatry ny zava-mahatalanjona maro izay tazomin'ny tanàna ho anao, toy ny mosque misy azy.
Jereo izay rehetra hitanao mandritra ny andro maromaro ao amin'ny tanànan'ny Italia any Siena, tanàna iray fantatry ny festival Palio.
Ny tanàna kelin'i Aix-en-Provence dia toerana manintona any atsimon'i Frantsa, be dia be ny zavatra azo jerena sy azo atao.
Sidina mora mankany Palma de Mallorca, zotram-piaramanidina, miaraka amin'ny eDreams
Sidina mora mankany Palma de Mallorca, zotram-piaramanidina, miaraka amin'ny eDreams ... Fantaro i Mallorca raha mbola tsy nanao an'io tolotra mahafinaritra io ianao.
Mandehandeha any Carcassonne, France, ny zavatra ho hitanao
Ny tanànan'i Carcassonne na Carcassonne dia miorina ao atsimon'i Frantsa ary tanàna voatahiry tsara sy tsara tarehy tokoa.
Zavatra hita ao Fuerteventura
Jereo ny zavatra maro azonao jerena sy ataonao ao amin'ny nosy Fuerteventura, manomboka amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny tontolo voajanahary ary tanàna mahafinaritra.
Torohevitra fitehirizana mandritra ny fialantsasatra
Manome tetika tsotra vitsivitsy izahay hahafahanao mitahiry rehefa mikasa sy mankafy ny fialan-tsasatra manaraka, na aiza na aiza toerana alehanao.
Torohevitra amin'ny fanofana fiara mandritra ny fialantsasatrao
Jereo ny antsipiriany rehetra ilainao ho fantatra hanofa fiara mandritra ny fialantsasatrao, manomboka amin'ny fisafidianana ny orinasa ka hatramin'ny fiantohana.
Faran'ny herinandro faran'ny herinandro: Fijanonan'ny sidina mijanona ao Istanbul mandritra ny roa amin'ny 399 euro
Androany izahay dia manolotra tolotra vaovao hisarika ny sainao: sidina mijanona ao Istanbul mandritra ny roa amin'ny 399 euro miaraka amin'i Destinia.
Ankafizo ny lisitry ny zavatra ho hitanao sy hatao maimaimpoana ao an-tanànan'i Berlin, satria ny zavatra tsara indrindra dia azo ankafizina tsy andoavam-bola.
Nahita an'io fifanarahana lehibe io izahay: Mandehana mankany Ibiza avy any Madrid izay mihoatra ny 4 euro fotsiny ao amin'ny eDreams. Araraoty ity fanararaotana ity!
Mitadiava toerana 11 ao Asturias izay tsy azonao adino. Avy amin'ny lalan'ny natiora ka hatrany amin'ny tanàna, tsangambato na tanàna kely.
Mitadiava toerana 10 eropeana mora vidy hankafizanao ny fialan-tsasatrao manaraka, miaraka amin'ireo tanàna mahaliana sy lafo vidy.
Rehefa tonga ny andro mahasoa dia efa maniry ny ho any amoron-dranomasina isika, ary satria efa fantatra ireo ao amin'ny faritra misy antsika, dia ...
Riquewihr sy Colmar, firavaka roa ao Alsace
Riquewihr sy Colmar dia tanàna roa ao Alsace izay lasa vatosoa ho an'ny fizahan-tany noho ny hatsarany sy ny tranony hazo.
Androany isika dia manana hevitra tsara hanararaotana ireo vola vahiny tavela amin'ny dia. Inona no azontsika atao amin'izy ireo?
10 amin'ireo torapasika tsara indrindra eran-tany amin'ny 2017
Jereo hoe iza ny morontsiraka 10 tsara indrindra eto an-tany amin'ity taona 2017 ity. Lisitra iray tena mahaliana izay hankafizanao ny morontsiraka fasika tsara indrindra.
Calanque D'En Vau, eo an-tsisin'i Marseille
La Calanque D'En Vau dia morontsiraka mahafinaritra izay eo an-tsisin'i Marseille, any Frantsa, aza hadino ny antsipiriany momba an'io toerana miavaka io
Ny fifindra-monina dia fifindra-monina isam-ponenana, izay mitranga amin'ny toerana niavianany ka hatrany amin'ny toeran-kafa iray.
Toerana manerana an'izao tontolo izao hankalazana ny Andron'i St. Patrick
Jereo ireo toerana rehetra eto an-tany ahafahanao mankalaza ny fetin'i Saint Patrick, ilay mpiaro an'i Irlandy.
Toerana 5 tena manokana hitsangatsangana amin'ny 2017
Kely sisa tavela amin'ny fetin'ny paska sy amin'ny fahavaratra manaraka ka tonga ny fotoana ...
Inona no jerena ao an-tanànan'i Cologne
Ny tanànan'i Cologne dia iray amin'ireo lehibe indrindra any Alemana ary manana manintona maro hankafizanao ny fitsidihanao, toy ny katedraly.
Zavatra ho hita sy hatao any Gothenburg
Ankafizo ny hevitra maro momba ny drafitra izay ho hita sy hatao ao Gothenburg, tanàna ara-barotra misy tranombakoka sy zaridaina.
Antony hitsidihana ireo Nosy Canary
Jereo ny sasany amin'ireo antony lehibe antony nisafidianan'ny maro ny nosy Canary ho fialan-tsasatra.
Ny toerana 10 tsara indrindra eran'izao tontolo izao hoy ny Lonely Planet
Jereo hoe aiza no toerana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao raha mandeha araka ny torolàlana an'ny Lonely Planet. Toerana mahatalanjona izay tsy maintsy tsidihina farafahakeliny indray mandeha.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Kroasia
Jereo ny sasany amin'ireo torapasika tsara indrindra any Kroasia. Tora-pasika an-tanàn-dehibe na morontsiraka idyllic amin'ireo nosy, tena mampiavaka azy ny sasany.
Maninona i Porto no toerana tsara indrindra any Eropa amin'ny 2017
Porto no voafidy ho toerana tsara indrindra any Eropa amin'ny 2017, ary tsy isalasalana fa tanàna tsara tarehy misy zavatra maro hatolotra izy io.
Fitsangatsanganana any Taormina, any Sisila, ny zavatra ho hita sy atao
Taormina dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Sisila rehetra, misy arabe taloha ary fahitana mahatalanjona amin'ny ranomasina sy Etna.
Jereo hoe inona ny antony lehibe mahatonga anao hitety dia lavitra any Irlandy. Manomboka amin'ny fetiny ka hatrany amin'ny lapa sy ny tontolon'ny.
Manolotra antsika zavatra maro ny renivohitr'i Irlandy. Toerana iray andehanan'ny mpizahatany maro mitady ...
Torohevitra sy hevitra ho an'ny mandeha irery
Manome anao torohevitra mahasoa izahay amin'ny fitetezana irery an'izao tontolo izao, zavatra ataon'ny olona maro kokoa ary mety ho fanandraman-javatra tsy mampino.
Samy tia mandehandeha daholo isika fa ho an'ny olona marobe mandray fiaramanidina dia lasa tena olana. Araka ny…
Ny tsiambaratelon'ny fifampiraharahana amin'ny tsena malalaka
Iza no tsy te handray fahatsiarovana ny toerana notsidihiny nandritra ny fialantsasatra? Maro amin'ireo fahatsiarovana ireo ...
Inona no ho hita any Bordeaux mandritra ny faran'ny herinandro
Jereo ny zava-dehibe rehetra amin'ny fitsidihanao ny tanànan'i Bordeaux, miaraka amin'ny tanàna taloha tsara tarehy sy ireo tranony tsara tarehy.
Mitadiava toerana 10 any Espaina handosirana ny ririnina mangatsiaka, fialamboly mahafinaritra folo mankany amin'ny toerana somary mafana kokoa sy akaiky kokoa.
Madrid dia iray amin'ireo tanàna espaniola mahaliana indrindra hitsidika azy satria manana fizahan-tany maro mpizaha tany hatramin'ny ...
Manohy mahita zoro ao amin'ny faritanin'i Pontevedra izahay, manomboka amin'ny morontsirak'i Cabo Home ka hatrany amin'ny Castillo de Soutomaior na ny riandrano Barosa.
Zavatra hita ao amin'ny faritanin'i Pontevedra (I)
Jereo ny zavatra hitanao rehetra ao amin'ny faritry ny faritanin'i Pontevedra, manomboka amin'ny tanàna kely ka hatramin'ny korontam-bato sy tsangambato.
Fitsidihana hatao any akaikin'i Roma
Mitadiava fitsidihana dimy any akaikin'i Roma izay azonao atao raha mankany an-tanàna ianao, hatrany Pompeii ka hatrany amin'ny Villa del Este na Herculaneum tsara tarehy.
Ny tanànan'i Canberra dia renivohitr'i Aostralia ary tanàna iray misy zavatra betsaka hita, hatramin'ny tantaran'ny firenena ka hatrany amin'ny sehatry ny zavakanto.
Tenerife dia nosy afaka manolotra be dia be amin'ny lafiny fizahan-tany, manomboka amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny fizahan-tany voajanahary ary toerana fialamboly tena mahaliana.
Toeran-kafa vaovao eropeana vaovao 5
Mahita toeran-tsoa eropeana dimy izay mipoitra mba ho lasa manintona mpizahatany miaraka amin'ny manintona maro.
5 drafitra hatao amin'ny Krismasy izay hanontanian'ny zanakao anao
Mpanakanto fanta-daza Andy Williams dia nilaza tao amin'ny hirany malaza iray fa ny Krismasy no betsaka ...
Torohevitra mahasoa mba handehanana mora vidy kokoa
Mitadiava torohevitra azo ampiharina sasany hianarana ny fomba fivelomana mora kokoa amin'ity taona ity. Ahoana ny fomba hahitana trano sy toerana itodiana amin'ny vidiny lafo.
Zavatra tokony hatao amin'izao andro krismasy izao any Barcelona
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia milaza aminao zavatra vitsivitsy tokony hatao mandritra ireo andro Noely any Barcelona, ​​tanànan'i Barcelona ity. Ankafizo ireo arabe mihiratra.
Firenena afrikanina 5 izay tsy nanoro hevitra azy ireo hivezivezy noho ny loza aterany
Amin'izao faran'ny 2016 izao dia fotoana mety hanombohana ny drafitra ny diantsika manaraka mandritra ny taona 2017. Iray…
Mahita tanàna eropeana 8 hankafizanao ny ririnina amin'ity vanim-potoana ity, miaraka amin'ireo toerana mahafinaritra sy mahafinaritra hitsidihana.
Fitsangatsanganana bebe kokoa any Iran
Manohy mampitolagaga antsika amin'ireo zava-mahatalanjona i Iran. I Isfahan dia tanàna lehibe sy kolontsaina ary lovambe manerantany. Aza mieritreritra ny tsy hitsidika azy!
Jereo hoe ohatrinona ny zavatra azonao atao maimaim-poana any Madrid. Manomboka amin'ny fitsidihana ireo tranombakoka manan-danja indrindra ka hatramin'ny fahitana ny Royal Palace na ny kianja.
Mbola misy zavatra maro hafa azo jerena sy ankafizina any Egypt, ary toerana feno tantara sy fifanoherana izany, ho fialan-tsasatra mety.
Zavatra ho hita sy hatao any Egypt (I)
Betsaka ny zavatra azo jerena sy atao any Egypt, ary toerana misy kolontsaina taloha izy io, misy tempoly, piramida ary tanàna mahafinaritra.
Ny Acropolis dia iray amin'ireo zavatra lehibe hita ao an-tanànan'i Atena, saingy misy zavatra maro hafa, miaraka amin'ireo manodidina mahaliana.